Ifektri Yokuwasha | I-China Washbasin Manufacturers, Abahlinzeki
Amanoni okugeza i-CH-6362
I-LONGSTAR Minions washbasin, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile futhi ezingashibilikisi, nazo zingaxhumana nokudla. It onqenqemeni bushelelezi, kuyinto ukhululekile ukuyisebenzisa. Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile. Ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Amanoni okugeza i-CH-6363
Amanoni okugeza i-CH-6365
Amanoni okugeza i-CH-6366
Amanoni okugeza (S) CH-6352
I-LONGSTAR Minions washbasin, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile futhi ezingashibilikisi, nazo zingaxhumana nokudla. Inomphetho oshelelayo, kukhululekile ukuyisebenzisa; Futhi ngomklamo wesibambo ongasheleli, kulula ukuwubamba; Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile. Ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Amanoni okugeza (L) CH-6353
Amanoni okugeza (S) CH-6357
Amanxiwa kadoti (S) CH-6369
I-LONGSTAR Minions trash can, yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile. Kulula ukuyisebenzisa, Uma isinyathelo kancane phansi, isivalo sasizovuleka. Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile. Ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Amabhokisi ensipho ibhokisi CH-6336
Ibhokisi lensipho le-LONGSTAR Minions, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eliqinile futhi elingashelelezi. Ngomklamo owakhiwe kabili, nangomgodi wokukhipha ezansi, Uvimbela insipho ekungeneni; Inendawo ebushelelezi, izwakala ikhululekile, futhi kulula ukuyihlanza; Futhi ibingasebenzisa ekhishini, ibingasetshenziswa njengesitoreji sasekhishini. Ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Amanoni okugeza i-CH-6360
Amabhokisi ensipho ibhokisi CH-6392
Ibhokisi lensipho le-LONGSTAR Minions, lenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eliqinile futhi elingashelelezi. Ngomgodi wokukhipha ezansi, Uvimbela insipho ekungeneni; Futhi ngomklamo wesembozo, kulula ukuphatha lapho usohambweni; Inendawo ebushelelezi, izwakala ikhululekile, futhi kulula ukuyihlanza; Futhi ibingasebenzisa ekhishini, ibingasetshenziswa njengesitoreji sasekhishini. Ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Amanoni okugeza i-CH-6361